ဘာသာရေး အမြင်ကျယ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး litmus test လိုဖြစ်တဲ့ သီတဂူလို ဆရာတော်ကို ဝေဖန်ရင်ကျတော့ ရှူးရျူးရှားရှားတွေ ဖြစ်ကုန်ရော | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Myanmar’s best known monk named Thidagu Abbot Nya Neik Tha Ya delivers the most ill-informed, ignorant and racist speech on religion and conflicts in Burma and around the world
ကျောက်ဖြူက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေ အ စဉ် အဆက်နေလာခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို မီး နဲ့ဝိုင်းတိုက် အထူးစီးပွားရေးဇုံဆိုပြီး ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီးဟောင်းကြီးရဲ့ သားတွေသမီးတွေ အပြင် ဗီအိုင် ပီခရိုနီတွေက ၀င်ပြီး သူများတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေပေါ်မှာ ကော်ဇောဝင်ခင်းသွားတာ »
ဘာသာရေး အမြင်ကျယ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး litmus test လိုဖြစ်တဲ့ သီတဂူလို ဆရာတော်ကို ဝေဖန်ရင်ကျတော့ ရှူးရျူးရှားရှားတွေ ဖြစ်ကုန်ရော
Kaung Kin KoJanuary 23 2015
ဘာ….ဘာသာရေး ဥသျှောင်တွေကို မဝေဖန်သင့်ဘူး။ ဟုတ်လား?
ဥသျှောင်တွေက အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ ဦးဝီရသူလို လူကို လူတွေဆဲနေကြတာက လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရှိန်အဝါ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ သူမှားတာကို လူတော်တော်များမျာ သိလာပြီ။ (အရင်တုန်းကတော့ သူ့ကိုလည်း ထောက်ခံတဲ့သူ များခဲ့ဖူးတယ်) ဒါပေမဲ့ မှန်သယောင်ယောင် ဖြစ်နေတဲ့ နာမည်ကြီး ခေါင်းဆောင်တွေကို ဆန်းစစ် ဝေဖန်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။ ဒါ သူတို့ကို မုန်းလို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ပြောသမျှ လူတိုင်းမှန်တယ်ထင်နေရင်၊ ခေါင်းငြိမ့်နေရင်၊ မဆန်းစစ်ကြတော့၇င် အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ လူတွေက များများဝေဖန်ပေးမှ သူတို့လည်း ကြောက်ပြီး ငြင်းချက်ထုတ်တာမျိုးတို့၊ နောက်နောင်မှာ ရှောင်တာမျိုးတို့ လုပ်ကောင်းလုပ်လာလိမ့်မယ်။ တဲ့(ဒဲ့) ပြောရရင်တော့… တချို့က သီတဂူကို မဝေဖန်သင့်ဘူး ပြောလို့ ရေးလိုက်တာ။
.ဦးဝီရသူလောက်ကို ဆဲနေတာထက် သီတဂူလိုကို ဝေဖန်ဖို့က ပိုအရေးကြီတယ်။ လူတော်တော်များများက ဦးဝီရသူကို ဆန့်ကျင်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိပ်အမြင်ကျယ်သွားပြီ ထင်ကြတယ်။ ဘာသာရေး အမြင်ကျယ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး litmus test လိုဖြစ်တဲ့ သီတဂူလို ဆရာတော်ကို ဝေဖန်ရင်ကျတော့ ရှူးရျူးရှားရှားတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာက ကိုယ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကို။ ဒီတော့ ကိုးကွယ်မှုရဲ့ ပြင်ပကို ခဏလောက် ထွက်ပြီး ကြည့်မှပဲ မှားနေရင် မှားတာကို မြင်ရမယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်နေမယ့် အစား ကာလမသုတ်ကို နှလုံးသွင်းတာက ပိုအကျိုးရှိမယ်။ တကယ်လိုအပ်လာရင် ကိုရမ်ကျမ်းထဲကအစ….ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကျမ်းတွေက အစ (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ reason နဲ့ ) ဆန်းစစ်ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ မှန်နေတယ်လို့ ယုံကြည်နေပြီဆို ဆန်းစစ်ဆင်ခြင်မှာကို ဘာစိုးရိမ်စရာ ရှိလို့လဲ။ဘာသာရေး ဥသျှောင်တွေ၊ ဘာသာရေး အစွဲအလမ်းတွေကို မဝေဖန်ရဘူးဆိုတော့ အဲဒါတွေက “အာဏာရှင်” ကြီးတွေလား။
This entry was posted on February 7, 2015 at 10:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.